ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: December 2009
ဒီနေ့လေးမှာ သတ္တဝါတိုင်း၏ မိခင်မေတ္တာများကို အွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှ နေ၍ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ သီချင်းများကတော့ ကျမနှင့် ကျမ၏မိခင် ကြိုက်နှစ်သက်သော သီချင်းများ စုစည်းဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။
သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်း၍ အေးမြကြည်လင်သော မိခင်မေတ္တာများ သတိရလျှက်....။
Posted by Crystal at 2:59 AM0comments
မေတ္တာဥယျာဉ်ဆိုဒ်မှ ခွင့်တောင်း ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
" ထိမ်းမြားလက်ထပ်တယ်" ဆိုတာ လူလားမြောက်ပြီ လို့ ကြွေးကြော်ပြီး၊ လောကဓံကို စိန်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်လို့ တစ်ယောက်မျက်မှာ တစ်ယေက်ကြည့်နေဖို့ /မဟုတ်တော့ဘူး"
ဒီနှစ် ၁၃၆၄-ခုနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့က တပည့်ဇနီးမောင်နှံတို့က နှစ်ဦးမှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ်ပွဲ ကုသိုလ်ပြုကြလို့ သြ၀ါဒ ပေးပါဆိုတာနဲ့ ပြောပေးလိုက်ရတယ်။
ပရိတ်သတ်ကလည်း သတိုးသားရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုပဲဖြစ်လို့ တပည့်ရင်းချာများချည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ရယ်ရယ်မောမောပဲ ပြောခဲ့ဖြစ်တာပါ။ မထေရ်မြတ်တို့ စကားဝိုင်း ကြားထဲမှာ မထေရ်လတ် စကားတစ်ခုကို ထည့်လိုက်ရတာကတော့ ဖတ်ရှုသူအတွက် အကျိုးမဲ့ မဖြစ်တန်ကောင်းဘူး ထင်လို့ပါ။ မူရင်းအတိုင်းပဲ မှတ်တမ်းပြု လိုက်ပါတယ်။
ထိမ်းမြား လက်ထပ်ပြီးကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံကို သြ၀ါဒပေး ရမယ် ဆိုတော့ ဖတ်ပြီး အမှတ် တရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာပြန် ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲက စကားကို သတိရမိတယ်၊ တိတိကျကျ တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဆိုလိုရင်းကတော့ " သင်ဟာ အသိပညာ များလည်း ပြည့်စုံကောင်း ပြည့်စုံ နေမယ်။ ရားထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း ပြည့်စုံကောင်း ပြည့်စုံနေမယ်။ အရွယ်ကြီးလို့ ဆံပင်များလည်း ဖြူကောင်းဖြူနေမယ်။ သို့သော် ထမ်းမြား လက်ထပ်ခြင်း မပြုရသေးသမျှ လူ လားမမြောက်သေး" တဲ့။
သူစာအလိုအရဆိုရင် အခုပြောမယ့် စကားဟာ လူလား မမြေက်သေးသူက လူလား မြောက်သူတို့ကို ဆုံးမတဲ့ သြ၀ါဒ စကားလို့တောင် ဆိုရတော့မလိုဘဲ။
မင်္ဂလာဆောင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မပြောခင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သတိထားမိခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်မျိုး အကြောင်းကို အရင်းပြောချင်တယ်(၁) သဲသဲကွဲကွဲ ဇနီးမောင်နှံနဲ့(၂) မသဲမကွဲ ဇနီးမောင်နှံတို့ အကြောင်းပါပဲ။ သဲသဲကွဲကွဲ ဇနီးမောင်းနှံဆိုတာ" မျက်စိအောက်က ပျောက်မှာပင် အလွန်စိုးတယ်"ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် စကားကို ဘ၀လမ်းညွန်ထင်ပြီး အဖြစ်သဲ လိုက်နာကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ မျိုးကိုပြောတာ။ အလုပ်သွားတာ၊ ဈေးသွားတာမျိုးကိုတောင် စိတ် မချနိုင်ကြတာတို့၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေ့လို့ တရင်းတနီးနှုတ်ဆက်တာ ကိုတောင် မနာလို မရှုစိမ့်နိုင်ကြတာတို့၊ မကျေမနပ် ပူကြ ဆူကြတာတို့ လုပ်နေကြတဲ့ ငြူငြူ စူစူ အူတူတူဆိုတဲ့ စုံတွဲမျိုးပေါ့။
" စိတ်မချနိုင်ဘူး"ဆိုတာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ကောက်ချက်ချ ကြည့်ရင် အချင်းချင်း ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ဣဿာ မစ္ဆရိယ ဒေါသစတဲ့ ကိလေ သာ စိတ်ရိုင်း စိတ်ပူတွေ တသီကြီး ဖြစ်တတ်တာမို့ ဒီလို စုံတွဲမျိုးဟာ မေတ္တာ ဗြဟ္မစိုရ် တရား ကင်းမဲ့တဲ့ ကိလေသာစိတ် သက်သက်နဲ့ စုံတွဲ မျိုးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
ကြာတော့ တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဝမ်းတွေ ကွဲလွဲလာ ကြရင်း နောက်ဆုံး ဇနီးမောင်နှံ ကွဲကြတဲ့အထိ ရောက်ကုန်ကြရော။ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ လက်တွဲကြသူ မှန်သမျှ ဒီလိုပဲ။ အစမှာတော့ သည်းကြတယ်။ နောက်တော့ ကွဲကြတာပဲ။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား တာက "မေတ္တာသိနေဟ" မေတ္တာဆိုတာ ခိုင်မြဲအောင် တွဲကပ်ပေးတဲ့ အစေးဓာတ်တဲ့။ ဒီ အစေးဓာတ်မပါရင် ကြာကြာမတွဲနိုင်ဘူး။ ကွဲတတ်ကြတာပဲ။ ခုကာလစကားနဲ့ဆိုရင် ဒီလို စုံတွဲ မျိုးကို ရွှေရည်စိမ်စုံတွဲ၊ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်စုံတွဲ၊ ဒါမှမဟုတ်"အင်တွဲ" တွေလို့များ ပြောရမလား ဘဲ။ ဘယ်သူ့ကိုလို့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန် ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရ ကြားရ တွေ့ရ တတ်တဲ့ လောက ဓိဋ္ဌာန်သဘော ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်သဘောကို ပြောရတာ။
ထိမ်းမြားတယ်ဆိုတာ လူလားမြောက်ပါပြိလို့ ကြွေးကြော်ပြီး လောကဓံကို စိန်ခေါ် လိုကတာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်နေဖို့ အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။
တစ်ချို့ ငယ်ပေါင်း အကြောင်းသိ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဆိုရင် ပြောသံ ဆိုသံမှာ နင်- ငါ- ဟေ့- ဟဲ့ ဆိုတဲ့ အသံတွေ လွှမ်းနေတတ်ကြလို့ နဘေးက ကြားရတဲ့သူတွေက ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလား လို့တောင် ထင်ရတယ်။ ဟန်ဆောင်တာ အဖြစ်သည်းတာတွေ မပါတော့ ပြောသံ ဆိုသံ ကလည်း မပြစ်ချွဲတော့ဘူးပေါ့။ သူတို့ အဖြစ်သည်းတာကိုကြည့်ုပြီး အချစ် နည်းတယ်လို့ မထင်လိုက်လေနဲ့၊ ယုံကြည် စိတ်ချလို့ အနည်ထိုင်ပြီး အချစ်မြဲသွားကြတာ။
အနည်ထိုင်တယ်ဆိုလို့ အသားသေပြီး အေးစက်မာခဲ သွားတယ်လိုလည်း မထင်လေနဲ့ ၊ မဟုတ်ဘူး။
ရှင်သန်နေတဲ့ သစ်ပင်ဟာ အနှစ်လိုပဲ။ မာပေမယ့် မခဲဘူး။ အမြဲကြီးထွားနေတာ။ ပင်စည်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် အနှစ်က ကြီးထွားလိုက်နေကြတာ။ ဒါကြောင့်လည်း သားသမီး တွေကနေ မြေးတွေ မြစ်တွေအထိ အသိုက်အအုံ ကြီးလာလေ သူတို့ မေတ္တာဓာတ်က ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လေ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။
ဒီနေ့ ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲကော ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါချင်ကြသလဲ။ ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပြီး ရောက်နိုင်တဲ့ လမ်းမှန်အတိုင်း စည်းကမ်းကျကျ လျှောက် လှမ်းကြ။ ဘ၀နောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်ဗေဒင်ကိုမှ မမေးနဲ့၊ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လမ်းပေါ် က မှတ်တိုင်များက ကိုယ့်ဘ၀မှတ်တိုင်ပဲ၊ လမ်းဆုံးမှာရှိတဲ့ ပန်းတိုင်ဟာလည်း ကိုယ်ဆိုက် ရောက်ရမယ့် ပန်းတိုင်ပဲ။ လျှောက်တဲ့လမ်းကတစ်မျိုး၊ ရောက်တဲ့ ပန်းတိုင်းကတစ်မျိုးဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါဟာ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိတဲ့ ကမ္မနိယာမ သဘောပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ဓမ္မဘေရီဆရာတော် စာအုပ်တွေမရှိဘူးလား တပည့်တော်တို့ အရမ်းကို နှစ်သက် တာဘဲ၊ ဆရာတော်စာတွေ တရားတွေ ဖတ်လို့ကို အားမရနိုင် ၊ နာကြားလို့ကို မတင်းတိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ စာဖတ် ၀ါသနာရှင် လူငယ်လေးများ တောင်းဆိုချက်အရ စေတနာ မေတ္တာများဖြင့် ဒီနေ့မှ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုက ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ဦး ပေးပို့လှုဒါန်းလိုက်သော ခိုင်ခိုင် မြဲမြဲ မင်္ဂလာ စာအုပ်သေးလေးထဲမှ ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
(အကြောင်းလေးများတိုက်ဆိုင်ပါသဖြင့် 16-Jan-2005နေ့အတွက် အမှတ်တယ အနေဖြင့် ဖေါ်ပြအပ်သည်။)
သမီးရည်စားအတွဲတစ်တွဲမှာ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ဘယ်အရာရာမဆို ကောင်မလေးကပဲ ဦးဆောင်နေသလိုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါကိုကောင်မလေးသိပ်သဘောမကျဖြစ်နေတာ….
တစ်ရက်… နှစ်ယောက်ပင်လယ်ပြင်ကို အပျော်စီးသင်္ဘောနှင့် အလည်သွားချိန်မှာသင်္ဘော မှောက်သွားတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနှင့် ပျဉ်ပြားတစ်ချပ် သူတို့ ရေပေါ်မှာ မျောနေကြတယ်။
“နင်ကြောက်နေလား” ကောင်မလေးမေးတော့ “ ဓါးသေးသေးလေးကို ထုတ်လာပြီး “ကြောက်ပါဘူး၊ ငါးမန်းတွေ လာရင် ငါဒီဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်မယ်” လို့ပြောတော့ ကောင်မလေးက ခေါင်းလေးခါပြီး ရီတယ်……..
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သင်္ဘောတစ်စင်းလည်း သူတို့ မျောလာနေတာကို တွေ့တယ်…ပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာ ငါးမန်းတွေလည်းလာနေတယ်….ကောင်မလေးက “ငါတို့ အစွမ်းကုန်ကူးခက်ကြရအောင်”
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို ပျဉ်ပြားပေါ်ကတွန်းချလိုက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း ကူးသွားတယ်…. “ဒီတစ်ခါငါအရင်ကူးမယ်ဆိုပြီး” ထွက်သွားတယ်….ကောင်မလေးမှာ ပြောမတတ်အောင် အ ပြီးကျန်ခဲ့တယ်…..ကောင်လေးဟာ ငါးမန်းတွေဝန်းရံနေတဲ့ကြားမှာ ကူးခက်ရင်း “ငါနင့်ကို
အရမ်းချစ်တယ်” လို့ဆိုကာပင်လယ်ထဲ မှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်…..သင်္ဘောသားတွေ က ထိုအချိန်မှာ ကောင်မလေးကို ကယ်တင်လိုက်တယ်….သင်္ဘောcaptain က “ကောင်မလေး၊ သူဟာ ငါတွေ့ ဖူးတဲ့လူတွေထဲမှာ အရဲရင့်ဆုံးပဲ သူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်” “မဟုတ်ဘူး၊ သူကငကြောက်” လို့ ကောင်မလေးကဆိုတော့ သင်္ဘောcaptain က “ဟာ ..........ဘာလို့လဲ၊ နင်တို့ကို ကယ်မလို့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်နေတာ၊ ထင်ထင်ရှားရှားပဲ နင့်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီး သူ့လက်ကိုသူ ဓါးနဲ့
ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်လိုက်တယ်…. ငါးမန်းဆိုတာ သွေးညှိနှံ့ကို ချက်ခြင်းသိတာ… နင်ကိုကယ်ဖို့ အချိန်ရအောင်ပါ….သူသာဒီလိုမလုပ်ရင် နင်လည်း ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး……….
( လူသားတိုင်း အချစ်အတွက် အရင်းနှီးများတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းတွေမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ အချစ်အတွက်ဆို အားလုံးကိုပေးဆပ်ရဲကြပါတယ်။ ဖော်ပြဖို့ခက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ဆွေးမြေ့မှုတွေ မတွေ့ကြရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း)
သီချင်းတွေ ရှာရင်း ကာတွန်းကြိုက်တဲ့ ကျမတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ အတူကြည့်ဖို့ပါ။
စာဖတ်သူတို့လည်း အကြိုက်တူရင် နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေကြသော ချစ်သူများအတွက်...။
ဇော်ဝင်းထွဋ် + ထွန်းအိန္ဒြာဗို - မိုင်ပေါင်းကုဋေ
“ဒီကမ္ဘာကြီးအဆုံးကို ကိုယ်သွားမယ် အကြင်နာ အိပ်မက်တွေ ကုန်သွားမှာကို စိုးတယ် ယဉ်ယဉ်လေး ရူးလို့ နေ သူ့ ရဲ့ အပြုံးတွေ ကိုယ်တမ်းတ ကိုယ်သတိရ .......... ပြာရီမိုးသားအောက်က သူ့ အပြုံးတွေ မှုန်ရီဝေဝါးသွားမယ့် အချိန် အချိန်ခဏလေး မျှော်လင့်ခြင်းနေ့ သစ်အောက်မှာ ကိုယ်မနိုးထချင်တော့ပါ ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ် တကယ် သိပ်ချစ်တယ် ............ ပင်လယ်ကြီး ကိုယ် ဖြတ်သန်း အကြင်နာခွန်အားတွေ တောင်စွယ်များဝိုင်းရံ ကာရံထား အတွေးနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့မယ် မမုန်းဘူး အချစ်ကလေးရယ် တစ်ယောက်တည်း မနေ ချင်ဘူး ကိုယ်တို့ ဝေးနေ မိုင်ပေါင်း ကုဋေ ........... အကြင်နာ လရိပ်အောက်မှာ ခိုနားစဉ် ကိုယ်တို့ နှစ်ဦးဝေးကြတဲ့ မိုင်ပေါင်းကုဋေခဏလေးလို ကာရံနဲ့ သီချင်း လေးများစွာ သူ့ အတွက်ဆိုညည်းခါ လာခဲ့မယ်.............” (ဇော်ဝင်းထွဋ်+ထွန်းအိန္ဒြာဗို)
ဇော်ဝင်းထွဋ် + ထွန်းအိန္ဒြာဗို - အချစ်များသူ့ဆီမှာ
မေဆွိ - မောင်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေစက္ကူများကို ဗဟုသုတရစေဖို့ ကူးယူဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အကုန်လုံး မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။
အီးမေးမှ ရလို့ အမှတ်တယအနေနဲ့ ကူးယူဖော်ပြထာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူလ ဘလော့လိပ်စာတွင်လည်း ကြည့်ရှူလေ့လာနိုင်ကြပါသည်။
(A)ရာဝတီတိုင်းမှာ မွှေနှောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းလေမုန်တိုင်းလို ကြီးမားပါရဲ့ မေရယ်.....။ မေ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ..
(D)ကောင်ဖြေရှင်းသုတ်သင်ပြပါမယ်...မေ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ မေနဲ့ပက်သက်လာခဲ့ရင် အင်မတန်မှ
စွဲလမ်းစိတ်ကြီးမားတဲ့သူပါမေရယ်၊ဘယ်လောက်တောင်မေ့အပေါ် စွဲ လမ်းသလဲဆိုတော့မေအမှတ်မထင် လွှတ်ထုတ်လိုက်တဲ့
(F) ကွဲကြေမွသွား မှာသေချာပါတယ်မေ၊ မေရယ် ကိုယ်မေတ္တာကို တုံ့ပြန်ပေးပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပေးပါ၊ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ ပန်းကလေးရဲ့ ရနံ့ကို ပိုင်ပိုင်နှိင်နှိင် ရှိုက်နမ်း မွှေးကြူခွင့်ပြုပါ။ သည်လိုတောင်းဆို လိုက်တာတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ကိုယ်ဟာ အင်မတန်မှ
(H) ချင်ယောင်လည်း ဆောင်မနေပါနဲ့တော့၊ ကိုယ်ဟာတစ်သည်းမှာတစ်သက်၊ တစ်သက်မှာတစ်သည်း၊ မျက်နှာလည်း မများတက်သလို
(I) တွေတိုင်းလည်း ခြေဆေးတက်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံထားလိုက်စမ်းပါ၊ ကိုယ်အခု
(J) ရုဆလင်နိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်နေတယ်မေ၊ ပြည်တွင်းစစ်မှာ အချင်းချင်း တိုက်ကြခိုက်ကြနဲ့ အငြိုးအတေးကလည်းကြီးပါ့၊ နဖူးကအမာရွတ် မြင်လေတိုင်း မင်းမဟော်ကို အခဲမကျေဖြစ်နေတဲ့
(K) ၀ဋ် ပုဏ္ဍားတောင် လက်မြှောက် အရှုံးပေးလောက်ပါရဲ့၊ မေနဲ့ကိုယ်တို့ကြားမှာတော့ လက်ကလေးတွေ တွက်ချိူးရေဖို့ရာ အမျက်ကလေးတွေ သက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ပါဘူးနော်၊ ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို မေးကြတယ်၊ ကိုယ်ဟာမေ့ရဲ့
(L) စတုံအိုးကြီးကို သဘောကြလို့ ချစ်သွားတာလားတဲ့၊ ရယ်ပဲရယ်စရာ ကောင်းသေးတော့၊ ကိုယ်က မေ့ရင်ထဲက ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားလေးကိုသာ ချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့် (M) ပြောပြလိုက်မှ ငြိမ်သွားကြတယ်၊ ဒါတောင်မှ အထွန့်တက်လာကြသေးတယ်။ မေရယ် .......။
(N) ဏ္ဏဝါလှိုင်းရေပြင်ထက်မှာတော့ ငှက်မောင်နှံက တူယှဉ်တွဲ ပျံသန်းလို့ပေါ။ ကိုယ်ဟာ မေ့အပေါ်
(Q) ပင်တွေကို နှုတ်ပြီး ကိုယ့်ရင်ဝကို ဆောင့်ထိုးလိုက်ပါတော့။ ကိုယ်ဟာ ဖြီးဖြန်းအပိုကဲလို့ မညာတက်သလို ကျီးကန်းလိုလည်း မ
(W) ဘောလုံးတစ်လုံးက ကျောကုန်းကိုလာမှန်တယ်၊ အမယ်လေးလေး၊ အောင့် လိုက်တာ၊
နာလိုက်တာ၊ အဆုတ်တွေ ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး၊ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မှပဲ
အဲ ....... တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကိုယ်အပေါ် မေ့ ဆီက မေတ္တာ တုံ့ပြန်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဟာ အင်ဂျင်
(Z) ကျိုးလို့ နိဂုံး ချူပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
A store that sells husbands has just opened somewhere, whereawoman could go to chooseahusband. Among the instructions at the entrance isadescription of how the store operates.
You may visit the store ONLY ONCE ! There are six floors and the attributes of the men increase as the shopper ascends the flights.
There is, however,acatch . You may choose any man fromaparticular floor, or you may choose to go upafloor, but you cannot go back down except to exit the building!
On the first floor the sign on the door read:
- These men have jobs and love the Lord.
- These men have jobs, love the Lord, and love kids.
- These men have jobs, love the Lord, love kids, and are extremely good looking. 'Wow,' she thinks, but feels compelled to keep going.
She goes to the fourth floor and sign read:
- These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop-dead good looking and help with the housework. 'Oh, mercy me!' she exclaims, 'I can hardly stand it!' Still,
She goes to the fifth floor and sign reads!
- These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop
-dead gorgeous, help with the housework,
- You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please.
Thank you for shopping at the Husband Store. Watch your step as you exit the building, and haveanice day !
This to all men foragood laugh and to all the women who can handle the truth !
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် စာမေးပွဲစစ်ဆေးနေချိန်ဖြစ်၏။
ကလေးမလေးတစ်ဦးသည် စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာကို စိတ်ဖြင့် ဖတ်၏။
မင်္ဂလာ ဘယ်နှစ်ပါးရှိပါသနည်း။ ၄င်းတို့ကို ဖော်ပြပါ။
ကလေးမလေးက စဉ်းစား၏။ မင်္ဂလာ ဘာပါလိမ့်။ အော် သိပြီ၊ သိတာပေ့ါ လွယ်လွယ်လေးပဲ။
ဖြေ။ ။ မင်္ဂလာ နှစ်ပါးရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ မင်္ဂလာရှင် တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
(စာဖတ်သူ ဖြည်းဖြည်းရယ်ပါနော်။ အခုတော့ အဲဒီကလေးမလေးက ဘာသာရေးမှာ အဲဒီအချိန်အဲဒီသင်တန်းက ဆုရတဲ့သူတွေထက် ဘာသာရေးကို ပိုသိနေပါပြီ။ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ-ရေသေအတိုင်းမသွားဘူးလေနော်။)
စိတ်ကူးက ဘယ်မှာ အခြေခံတယ်
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်နဲ့ ပိုစ့်များအကြောင်းကိုလည်းပြောကြရင်း၊ ဦးဇင်းရဲ့ကဗျာသဘောကျမိကြောင်းကိုလည်း ပြောမိကြရင်းဖြင့် စိတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော စာလုံးများကို အွန်လိုင်းတွင် စာတင်မိပါသည်။ အသင့်လျော်ဆုံးသော ဆိုဒ်ကို ရှာမိသော ဝိမုတ္တိရသဆိုဒ်အတွက် “ပန်း”အမည်ဖြင့် ကွန်မင့်တွင် စာစီမိခဲ့သည်။
Three ways to die....
Takeaciger daily--you will die 10 years early!
Drink Rum daily-- you will die 30 years early!
Love someone truly--you will die daily!
A foolish MAN tellsawoman to STOP talking,Butawise man tells her that
she looks extremely BEAUTIFUL when her LIPS are CLOSED.
One good way to REDUCE alcohol consumption. ....
Before marriage--Drink whenever you are SAD,
After marriage --Drink whenever you are HAPPY!
Fastest means of transport......
3.Tell to woman
Need still FASTER--Tell her NOT to tell anybody
If you do NOT haveagirl friend--you are missing SOME thing in your life.
If you HAVEagirl firend--ypu are missing EVERY thing in your life.
Love your friends NOT their sisters, Love your sisters NOT their friends.
8.When do you CONGRATULATE someone for their MISTAKE??
Ans: On Their MARRIAGE
Why governments do NOT allow man to marry2women?
Bcoz, as per constitution, you canNOT Be Punished TWICE for the
Oops sorry.......power cut.... hahaaa...